RASMI: Kooxda Chelsea oo xaqiijisay lambarrada ay xiran doonaan xiddigaheeda xilli ciyaareedkan 2020/21 & Christian Pulisic oo lagu taagay lambarka 10-aad – Gool FM
(London) 10 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xaqiijisay lambarrada ay xiran doonaan xiddigaheeda xilli ciyaareedkan cusub ee 2020/21, kaddib markii ay la soo wareegtay ciyaaryahanno cusub.
Blues waxa ay ku dhawaaqday in lambarka 10-aad ee kooxda uu xiran doono xiddiga reer Ameerika ee Christian Pulisic, iyadoo lambarkaas ay isku haysteen xiddigo dhowr ah, lampard ayaana laacibkan ku abaal-mariyey bandhiggii uu sameeyey kal ciyaareedkii soo dhammaaday.
Lambarka 10-aad waxaa horay kooxda Chelsea ugu soo xirtay xiddigo ay ka mid yihiin J.Cole, Mata, Hazard iyo Willian.
Thiago Silva ayaa loo dhiibay lambarka 6-aad, Timo Werner ayaa xiran doona lambarka 11-aad ee Kooxda Chelsea, halka Ben Chilwell uu qaadan doono kal ciyaareedka cusub lambarka 21-aad.
Dhinaca kale saxiixyada cusub ee kooxda reer England, Kai Havertz iyo Hakim Ziyech ayaa loo kala dhiibay 29 iyo 22 sida ay u kala horreeyaan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg lambarrada ay xiran doonaan xilli ciyaareedkan 2020/21 xiddigaha Kooxda Chelsea oo dhan:-
"Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaari doonaa ilaa uu ka gaaro 40 sano" – Ryan Giggs